Faa'iidooyinka Tamarta Qodobka Mahadnaq leh - Adeegga Star 5
Home > Macaamiisheena
Nabadgelyada iyo habdhaqanka aad u fiican ee habdhaqan ahaaneed iyo daacadnimaduba way noo wanaagsan yihiin waxayna na siiyeen kalsooni si aan u sii wadno.
Waxaannu dooneynay inaanu ku amaano shaqaalahaaga shaqo fiican oo ay ku sameeyeen qalabeynta PV-ka todobaadkan.Laba toddobaad ka hor markii aan u dirnay codsi loogu talagalay e-mail, waxaa dib loo soo yeeray shan daqiiqo gudahood, sahankana waa la duubay galabtii!
- Sue iyo Graham, Camborne
Laga soo bilaabo telefoonkii bilowga ahaa markii shaqada la dhameeyey oo dhan kooxda Happy Energy ayaa ahaa mid saaxiibtinimo, niyad wanaag iyo waxtar leh. Adeeggooda macaamiisha ayaa ah mid labaad oo aan lahayn, si buuxda ayaa loo wargeliyey marxalad kasta oo ka mid ah geeddi-socodka waxaana su'aalahayga si degdeg ah looga jawaabay.
Ku kalsoonow dhaqdhaqaaqa Ganacsi - Ganacsi ku talo leh